Arday - InfoFinland
U soo guurista Finland > Tusmo fudud u soo guurayaasha Finland > Arday
Wax ku barashada Finland
Shahaadada dibadda laga soo qaaday ee gudaha Finland
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadan Waqooyiga Yurub, Midowga Yurub, ETA ama Switzerland oo aad Finland u timid waxbarasho, waa iin aad diiwaangelisaa xuquuqdaada joogitaanka. Ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah bogga InfoFinlandi Muwaadiniinta Midowga Yurub ama Muwaadiniinta u dhashay wuqooyiga Yurub.
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadan kale, waxaad u baahan tahay ogolaanshiyaha joogitaanka ardayga. Haddii wax ka barashadaada Finland ay ugu badnaan qaadaneyso saddex bilood uma baahnid ogolaanshiyaha joogitaanka arrintaas darteed. Waxaadse u baahan kartaa dal kugal.
Ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah bogga InfoFinlandi Waxbarasho u imaanshada Finland.
Finland waxaad wax uga baran kartaa sidi arday beddel ah oo kale ama waxaad ku baran kartaa digrii buuxa.
Haddii aad dooneyso in aad Finland ku timaado arday beddel ah, la xiriir tusaale ahaan xafiiska waxbarashada ee machadkaada ama qeybta caalamiga ah.
Bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan sida aad ardaynimo uga codsan karto dugsi sare, iskuul xirfadeedka ama dugsiga tacliinta sare.
Finland waxaad wax uga baran kartaa af finnish, iswidhish iyo mararka qaar afka ingiriiska. Dugsiyada tacliinta sare waxey mararka qaar barbaarmij waxbarashadeedyada qaarkood ku bixiyaan af ingiriis.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland.
Haddii aad tahay arday waxaad codsan kartaa guryaha la kireysto, kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay ardayda. Kirada guryaha ardaydu waa ka qiimo yar yihiin guryaha kale ee caadiga ah. Guryaha ardayda waxaa kireeya mu’asasooyinka guryaha ardayda, gudoonka tacliinta sare ee jaamacadaha, ururka ardayda iyo mu’asasooyin kale. Qeybo waxbarasheedyada qaarkood waxay leeyihiin guryo wadareed iyaga u gaar ah. Weydii qeybtaada waxbarashada, meesha aad ka codsan karto guriga ardayda.
Waxaad codsan kartaa guri islamarka aad hesho boos waxbarasho. Guri ka helista magaalooyinka waa weyn waxay qaadan kartaa todobaadyo amaba bilooyin.
Qeybta Dagganaanshaha ee InfoFinland waxad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan helidda guri iyo waxyaabaha kale ee ku saabsan degganaanshaha.
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadan Midowga Yurub ah, ETA ah, Switzerland ama muwaadin Waqwooyiga Yurub u dhashay waxaad xaq u leedahay inaad si xad la’aan ah u sameyso shaqo mudada waxbarashadaada, taas darteedna uma baahnid ruqsad. Shaqo sameyntu waxay xaq kuu siin kartaa inaad hesho ammaanka bulshada Finland.
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadan kale, waxaad xaq u leedahay inaad si xadidan shaqo ugu sameyso ogolaanshiyaha joogitaanka ardayga, haddii shaqadu ay tahay
shaqo ku tababarasho waxbarashada la xiriirta ama qalin-jebinta amaba
shaqo bar ah, ugu badnaan 25 saacadood todobaadki inta lagu jiro simistarka
shaqo buuxda marka qeybta waxbarashada aan waxbarasho ka qabanqaabsaneyn, sida guud fasaxyada xagaaga iyo ciidul-masiixiga.
Bogga InfoFinlandi Halkee laga heli karaa shaqo? ayaad ka helaysaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqo helidda Finland.
Xaq u lahaashiyaha shaqada ee ardaygaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad Finland u timid inaad wax ka barato adigoo ka imaanaya wadan kale oo Waqooyiga Yurub ah, waxaad xaq u leedahay inaad hesho daryeelka caafimaadka Finland. Waxaad daryeelka u heleysaa islamarkaasna aad u bixinaysaa lacagta adeegga sida dadka Finnishka ah oo kale. Sii qaado aqoonsi rasmi ah marka aad isticmaaleyso adeegyada caafimaadka.
Haddii aad Finland u timid inaad wax ka barato adigoo ka imaanaya wadan Midowga Yurub, ETA ama Switzerland waxaad xaq u leedahay in kaarka daryeelka caafimaadka ee Yurub aad ku hesho daryeelka caafimaadka ee aan laga maarmin. Samayso kaadh caafimaad oo Europian ah inta anad imanin Finland.
Haddii aad wadan kale Finland uga timid si aad wax u barato waxaad u baahan tahay caymiska jirada ee buuxa kahor inta lagu siinin ogolaanshiyaha joogitaanka Finland.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ogolaanshiyaha joogitaanka ardayga iyo caymiska jirada ee ogolaanshiyaha dartiis u baahan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Waxbarasho u imaanshada Finland bogagga Xafiiska dal u soo guurista.
Ardayda dugsiyada tacliinta sare ee Finland waxey ka tirsan yihiin xeyndaabka daryeelka caafimaadka waxbarashada. Wixii warar dheeraad ah weydii machadkaaga. Macluumaadka la xiriira daryeelka caafimaadka waxbarashada waxaad ka heli kartaa Hay'adda daryeelka caafimaadka ardayda jaamacadaha (YTHS) iyo bogga internetka ee Wasaarada Caafimaadka iyo Arrimaha Bulshada (Sosiaali- ja terveysministeriö).
Macluumaad ku saabsan adeegyada caafimaadka ee Finland waxad ka heli kartaa bogga Caafimaadka ee InfoFinlandi.
Daryeelka caafimaadkaardayda macaahida sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Daryeelka caafimaadka waxbarashadaFinnish | Iswidish
Manfacyada Keladu bixiso intooda badan waa kuwa aad xaq u yeelan karto, haddii aad Finland si rasmi ah ugu soo guurto. Ardayga ka imaanaya meel ka baxsan Midowga Yurub ama Soonaha ETA wuxuu xaq u yeelan karaa xoogaa manfacyada Kelada ah, sida manfacyada ceymiska jirrada. Macluumaad dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finland.
Shahaadooyinka ajnabiga ee gudaha Finland lagu heysto
Haddii aad shahaado tacliin ka soo qaaday dibadda waxaa faa’iido kuu lahaan kara isbara-dhigga shahaadada, aqoonsashada aqoontaada xirfadeed, xaq u lahaanshaha ku shaqeynta xirfadda ama muujinta aqoonta.
Bogga InfoFinlandi Shahaadooyinka dibadda ee Finland waxa ku qoran macluumaad ku saabsan in shahaadadaa laguugu aqoonsado Finland.